Ogaden News Agency (ONA) – Shirwaynihii 3-aad ee Jabahada ONLF oo Ka Furmaya Wadanka Eritrea.
Shirwaynihii 3-aad ee Jabahada ONLF oo Ka Furmaya Wadanka Eritrea.
Posted by Wariye Qaran	/ June 28, 2018
Waxaa ka furmaya wadanka Eritrea Shirwaynihii 3-aad ee Jabhada Wadaniga xoraynta Ogaadeniya (JWXO). Shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalaya ergooyin boqolaal ah oo ka kala yimid shanta qaaradood ee aduunka kuwaasi oo isugu jira masuuliyiinta JWXO, kaadirka, xubnaha, Golaha Dhexe.
Shirka ayaa waxaa lagu dooran doonaa Gudoomiyaha JWXO waxaa kale oo lagu dooran doonaa xubnaha Golaha Dhexe waxaana intaas ka horaysa shirka oo kulamo wada-tashi ah sii yeelan doona haduu ilaahay yiraahdo xubnaha Gudiga Fulin iyo Golihii Dhexe ee wakhtigoodii dhamaaday.
Shir waynihii ugu horeeyay ee Jabhada ONLF ayaa wuxuu ka dhacay gudaha Ogaadeniya gaar ahaana taariikhdu markay ahayd 1992-dii, waxaana gudoomiye loogu doortay xilligaas allaha u naxariistii Sheekh Ibraahim Cabdale Maax Hogaamiyaha ruuxiga ah ee JWXO. Waxaa kale oo shirwaynihii 2aad lagu qabtay isla gudaha Ogaadeniya sanadku markuu ahaa 1998 dii waxaana lagu doortay gudoomiye Adm. Maxamad Cumar Cismaan oo ah gudoomiyaha hada ee xilka haya.
Laga soo bilaabo 1998-dii ilaa wakhtigan xaadirka ah ayaan wax shirwayne ah la qabanin duruufo aad u qalafsan iyo halgan dheer oo lasoo maray awgii taasi oo keentay inuusan qabsoomin shirwaynaha ururka balse waa ilaahay mahadii in maanta lagu qabto shirwaynihii 3-aad ee JWXO Wadanka Eritrea.
Shirwaynahan ayaa wuxuu dhanka kale kusoo beegmayaa xili is badal wayn uu ka dhacay Itoobiya, is badalkaas oo laga yaabo inuu saamayn ku yeesho dadka Soomaalida Ogaadeniya ee gacanta gumaysiga ku jira. Shirwaynahan ayaa aad isha ugu haya shacab waynaha Soomaalida Ogaadeniya kuwaasi oo ka dhur sugaya waxa kasoo baxa iyo hogaanka cusub ee soo bixi doona haduu ilaahay yiraahdo.
Shirkan ayaa waxaa lagu wadaa inuu si rasmi ah u furmo maalmaha fooda inagu soo haya, wixii warar iyo wax bixin ah ee ku saabsan aad kala socon kartaan Wakaalada Warfaafinta Ogadenya ee ONA.